Daawo: Caruur walaalo ahaa oo si arxan-darro ah loogu dilay magaalada Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Caruur walaalo ahaa oo si arxan-darro ah loogu dilay magaalada Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhacdo argagax leh oo xalay ka dhacday duleedka magaalada caasimada ah ee Muqdisho, taas oo lagu dilay caruur walaalo ah, sida ay innoo xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka ah.
Caruurta oo ahaa wiil iyo gabar ayaa waxa da’dooda ay kala aheyd shan sano jir iyo todobo sano jir, waxaana saaka meydadkooda laga helay xaafadda Jaamacadda Shabeelle oo ka tirsan deegaan weynaha Garasbaaleey ee duleedka magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah ehellada caruurta la dilay ayaa innoo sheegay in wiilka iyo gabadha yar xalay adeeg loo diray, balse la waayey, iyadoo saaka dib loo helay meydadkooda.
Sidoo kale dadka soo arkay meydadka labadaasi caruur ayaa sheegay in si arxan darro ah loo dilay, isla-markaana mid ka mid ah caruurta xarig lagu sirqiyey, halka midka kale ilkaha ay ka daad-sanaayeen, taas oo ay ka argagaxeen dadka deegaanka iyo ehelladoodaba.
Caruurtan ayaa la sheegay in dilkoodu uu ka dambeyay adeerkood qabay hooyadood.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in goobta ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda Soomaaliya, waxaana ay xireen Seyga qabay hooyada dhashay caruurtaas, kaas oo lagu tuhmayo inuu geystay falkan, waxaana haatan ku socdo baariraano dheeraad ah.
Illaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah ama faahin faahin ah oo hay’adaha ammaanku ka bixiyeen dhacdadaasi xanuunka badan.